Git Sangit News » कुलमान ज्युलाई अझै ठूलो पदमा बढुवा गर्नुपर्छ। क्याप्टेन विजय लामा,
कुलमान ज्युलाई अझै ठूलो पदमा बढुवा गर्नुपर्छ। क्याप्टेन विजय लामा,
काठमाडौं , १२ भदौ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको ४ बर्षे कार्यकाल सकिन अब केही दिन मात्र बाकि रहेको छ । तर, समाजिक सञ्जालमा भने घिसिङलाई पुन नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्दै व्यापक चर्चा चलिरहेको छ । २०७३ साल भदौ २९ गते प्राधिकरणको प्रमुख भएर कार्यभार सम्हालेको २ महिनादेखिनै लोडसेडिङ हटाउन सुरु गरेर जनमासमा छाएका घिसिङलाई अबको ४ बर्षे कार्यकाल पनि काम गर्न दिनुपर्ने जनताको माग छ ।
कुलमान घिसिङको समर्थनमा बरिस्ठ कलाकार द्वय महजोडी मदनकृष्ण श्रेष्ठ , हरिवंश आचार्य , करिश्मा मानन्धर , क्याप्टेन विजय लगायत धेरैले सामाजिक सञ्जालबाटै पुन नियुक्ति गर्न अनुरोध गरेका छन् ।
कुलमान घिसिङको समर्थन गर्दै क्याप्टेन विजय लामा यस्तो लेख्नु हुन्छ :
कुलमान घिसिङ्ज्युको बारेमा ऐले सामाजिक सन्जाल देखि सबै ठाउमा वहालाइ विद्युत प्राधिकरणमा अझै अवधी थपेर राख्नु पर्छ भन्ने कुरा जताततै चलिरहेको छ, हरेक नेपाली जनताले यसबारे के होला भनेर चासो राखेको अवस्था छ!!
कुरा नचलोस पनि किन..वहाको कामको परिणाम हो! अँध्यारो बाट उज्यालो नेपाल बनाइ दिने त्यस्तो ब्यक्तिको बारेमा सबैलाइ चासो हुनुपनि पर्छ ।
जताततै कुलमानज्यु को कार्यकाल थप्नु पर्छ भन्ने कुरामा कसैको पनि दुइमत छैन भन्दा गलत हुन्न होला! अब के हुन्छ होला भन्ने कुरामा अड्किनु परेको छ हामी सबै!!!
राम्रो काम गरे पछि पदोन्नति हुन्छ हैन?? त्यसैले कुलमान घिसिङ ज्युलाइ महा प्रबन्धकको (Managing Director) पदमा राख्न गाह्रो भए प्राधिकरणको Executive Chairman को पदमा बडुवा दिएर अझै प्रभाबशाली बनाउन मिल्दैन र ? यसो गरे कसो होला ?
प्रकाशित मिति १३ भाद्र २०७७, शनिबार १०:४६